ESI MARA NA E GBOCHIRI GỊ NA SKYPE - SKYPE - 2019
Usoro Skype: otu esi mara na ị na-egbochi
Skype bụ usoro nke oge maka nkwurịta okwu na Intanet. Ọ na-enye olu, ederede na nkwurịta okwu vidiyo, yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ. N'etiti ngwaọrụ nke usoro ihe omume ahụ, ọ dị mkpa igosi oke ohere maka ijikwa kọntaktị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike igbochi onye ọrụ ọ bụla na Skype, ọ gaghị enwe ike ịkpọtụrụ gị site n'usoro ihe omume a n'ụzọ ọ bụla. Ọzọkwa, maka ya na ngwa ahụ, a ga-egosipụta ọkwa gị mgbe niile dịka "Akaraghị". Ma, enwere akụkụ ọzọ na mkpụrụ ego ahụ: gịnị ma ọ bụrụ na mmadụ gbochie gị? Ka anyị chọpụta ma ọ ga-ekwe omume ịmata.
Kedu ka ị maara ma ọ bụrụ na egbochiela gị na akaụntụ gị?
Ozugbo ekwesịrị ikwu na Skype adịghị enye ohere ịmara kpọmkwem ma ọ bụ onye ọrụ ma ọ bụ na-egbochie gị. Nke a bụ n'ihi iwu nzuzo nke ụlọ ọrụ ahụ. A sị ka e kwuwe, onye ọrụ ahụ nwere ike ichegbu onwe ya banyere otú ngbochi ga-esi meghachi omume na ngbochi ahụ, ọ bụ naanị n'ihi nke a ka ị ghara itinye ya na listi ojii. Nke a dị mkpa karịsịa n'ọnọdụ ndị ọkachamara maara na ndụ dị adị. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị na egbochiri ya, mgbe ahụ onye ọrụ nke ọzọ adịghị mkpa ichegbu onwe ya banyere ihe ga-esi na omume ha pụta.
Mana, enwere ihe ịrịba ama na-egosi na ị, n'ezie, amaghị na onye ọrụ ahụ egbochila gị, ma ọ dịkarịa ala echebara ya echiche. Ị nwere ike ịbịa nkwubi okwu a, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na onye ọrụ na kọntaktị egosiwo ọnọdụ ahụ mgbe niile "Ekeghị aha". Ihe nnọchianya nke ọnọdụ a bụ gburugburu ọcha nke gbara gburugburu gburugburu. Ma, ọbụna ichebe ọnọdụ a ruo ogologo oge anaghị ekwe nkwa na onye ọrụ ahụ egbochila gị, ma ọ bụghị naanị ịkwụsị ịbanye na Skype.
Mepụta akaụntụ nke abụọ
E nwere uzo iji mezuo nke oma jide n'aka na ana egbochi gi. Akpa gbalịa ịkpọ onye ọrụ iji hụ na ọnọdụ ahụ gosipụtara n'ụzọ ziri ezi. Enwere ọnọdụ dị otú ahụ mgbe onye ọrụ ahụ egbochighị gị, ma dị na netwọk, mana maka ihe ọ bụla, Skype na-eziga ọnọdụ na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na oku ahụ agbajiri, mgbe ahụ, ọnọdụ ahụ ziri ezi, onye ọrụ ahụ abụghị n'ezie ma ọ bụ gbochie gị.
Debanye na akaụntụ Skype gị, ma mepụta akaụntụ ọhụrụ n'okpuru pseudonym. Banyere ya. Gbalịa ịgbakwunye onye ọrụ na kọntaktị gị. Ọ bụrụ na ọ na-agbakwunye gị na kọntaktị ya, nke, na mberede, enweghi ike, mgbe ahụ, ị ​​ga-achọpụta ozugbo na ejirila akaụntụ gị ọzọ.
Ma, anyị ga-esi na eziokwu ahụ na ọ gaghị etinye gị. A sị ka e kwuwe, ọ ga-abụ ngwa ngwa: mmadụ ole na ole na-agbakwunye ndị ọrụ na-amaghị, na ọbụna karịa, ọ gaghị atụ anya na ndị na-egbochi ndị ọrụ ndị ọzọ. Ya mere, kpọọ ya. Eziokwu ahụ bụ na ejighi egbochi akaụntụ ọhụrụ gị, nke pụtara ị nwere ike ịkpọ onye ọrụ a. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ naghị eburu ekwentị ahụ ma ọ bụ tụlee oku ahụ, nbido mbụ nke oku a ga-aga, ị ga-aghọta na onye ọrụ a agbakwunyela akaụntụ mbụ gị na blacklist.
Mụta n'aka ndị enyi
Ụzọ ọzọ ị ga-esi chọpụta ihe nkedo gị site n'aka onye ọrụ ọ bụla bụ ịkpọ onye ị tinyela na kọntaktị. Ọ nwere ike ịkọwa ihe ezigbo onye ọrụ ị chọrọ. Ma, nhọrọ a, dị mwute ikwu, adịghị adaba n'ọnọdụ niile. Ọ dị mkpa ma ọ dịkarịa ala ka gị na onye ọrụ na-enyo enyo na-egbochi onwe ya.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ụzọ ị ga-esi ama ma ọ bụrụ na onye njirimara na-egbochi gị. Ma, enwere usoro aghụghọ dị iche iche nke ị nwere ike ịchọpụta eziokwu nke mkpọchi gị na ogo dị elu.